Idya mbeu idzi kusimudzira immune yako - ALinks
Isu tese takavharirwa kudzimba medu sezvo nyika ichirwisa iyo inouraya Covid-19. Kudzivirirwa idziviriro yehutano inotsvaga wese.
Kurudziro dzakaburitswa nevakuru vehutano hwepasi rose dzinokurudzira vanhu kuti vadye healthily. Vanhu vanodya kudya kwakaringana kuita kunge vane immune system iri nani.
Snacking iri kazhinji iyo Achilles chitsitsinho chevakawanda vedu kana zvasvika pakudya zvine hutano. Hazvina kuoma kudya katatu zvine mwero pazuva, asi isu itika kakawanda kukundikana kana uchidya.
Tichakupa yakaderera pasi mbeu nhatu hombe iwe yaunofanirwa kusanganisira mune yako yekudya, kunyanya izvozvi kuti nyika iri kukanganiswa necovid-19, nekuti ivo zvakare vachakubatsira iwe kuvandudza hutachiona hwako:
Mbeu yezuva yezuva, yekutanga
Kana iwe ukasawana zvakakwana antioxidants mukudya kwako, mbeu yezuva rinozozviitira. Mbeu dzeSunflower dzakakwirira muma antioxidants uye zvine huwandu hwakakwana hwemafuta. Magnesium uye vitamini E yakawanda mukati mawo. Nekuda kweizvozvo, kana uine ganda rakachenuruka, unogona kudya idzi mhodzi.
Tenga mbeu yakanakisa uye yakachena yezuva kubva pano.
Del Monte Raw Sunflower Mbeu homwe, 250 g Tenga @ ₹ 164.0
Dhijitari fiber yakawanda mune chikafu ichi.
Vitamin E yakawanda.
SFT Sunflower Mbeu Tenga @ ₹ 384.00
Icho chikafu chakasiyana-siyana chinovandudza hunhu hweganda, hunovandudza hutano, uye nekupa bvudzi.
Kunze kwezvose zvinovaka muviri zvinowanikwa mumhanga mhodzi, zvakaita seprotein, potasium, uye magnesium, pane chinhu chimwe chinoita kuti chive chinofanirwa kuve nacho: vhitamini K. Ichi chikafu hachiwanikwi mumakirasi mazhinji ezvikafu, uye kushomeka inogona kubatsira pakuderera kwemapfupa. Vitamin K inobatsira mukubatanidza calcium mumapfupa, nokudaro ichivasimbisa. Mbeu dzemanhanga dzakanyanya kukosha kune vanhu vane mapfupa asina kusimba kana arthritis.
NatureVit Raw Pumpkin Mbeu dzeKudya, 250g Tenga @ ₹ 225.00
MWOYO UYE HUPENYU HWAPFUPA: Mbeu yemanhanga ine zvinovaka muviri (high fiber) iyo inobatsira kuti moyo wako urambe uine hutano nekuderedza BP uye kuwedzera cholesterol yakanaka
Sorich Organics USDA Yakagadziriswa Organic Raw Pumpkin Mbeu - 200 Gm Tenga @ ₹ 236.00
Vitamin K, manganese, phosphorus, mhangura, magnesium, zinc, protein, uye iron zvese zvakawanda mazviri. Sezvo mhodzi diki idzi dzakakwira mu fiber yekudya, dzinogona kukuchengetedza zvizere kwenguva refu.
Mbeu dzefalooda. Mbeu dzeSabja dzakakwira muAlpha-linolenic acid (ALA), fatty acid iyo yakaratidzwa kubatsira nekudzikira uremu uye metabolism. Uyezve, flavonoid dzakadai sevicenin, orientin, uye beta carotene inowedzera hutachiona, kudzivirira dzihwa nefuruwenza.
Thanjai Natural Sabja Mbeu Tenga @₹ 190.00
Inoderedza kupisa kwemuviri (detox chinwiwa): mbeu dzebasil dzakanaka kuwedzera kune zvaunonwa panguva yezhizha. Inobatsira mukuderedzwa kwekupisa kwemuviri nekuita sechinhu chinotonhorera chaicho.
Mbeu dzeSabja dzinobva kuThanjai Natural dzakazara ma antioxidants, ayo anobatsira kuchengetedza hutano hweganda. Mishonga inorwisa mabhakitiriya inobatsira kusimbisa maseru eganda nekudzivirira hutachiona hunopinda mumuviri.
Profchef Sabja Basil Mbeu - 250 gm Tenga @ ₹ 220.00
Zvakanakira Sabja kana Basil Mbeu-
1. Aids mukudzikira uremu 2. Inodzikisa tembiricha yemuviri 3. Inochengetedza mashuga eropa
4. Inobatsira kubvisa kuzvimba uye kuzvimbirwa
5. Inobvisa Acid Reflux uye Chirungurira
6. Kusimudzira Hutano uye Hutano Hutano
7. Inotapudza Kukosora neFlu
mbeu dzakanakisisa dzekudzivirira
Yakanakisa Fondue Hari
Yakanakisa dishwasher pasi pemazana maviri emapaunzi
Yakanyanya kurara hammock yekumba
akanakisa mopping robot amazon
Ndeapi akanakisa emafuta ebvudzi muIndia? Tarisa Pano!